Fiaramanidina Shine | Tantsaha anaty aterneto | December 2019
Sokajy Fiaramanidina Shine
Ahoana ny fampielezana ny Shizandra Shinoa
Ny lemak'i Shina amin'ny fiainana voajanahary dia miaina any Shina, Korea, Japon, any avaratr'i Rosia. Io zavamaniry io dia mitombo ao amin'ny faritra rehetra: flat, tendrombohitra, akaikin'ny renirano sy renirano. Ny orinasan-tseraseran'ny Sinoa dia orinasa tsy misy karazam-borona ary tsara fitomboan'ny dacha. Vidim-bary sy tezitra, ny famokarana ny voan-javamaniry voajanahary Ity orinasa ity dia tena manohitra ny hatsiaka sy ny hafanana mangatsiaka, noho izany dia azo atao any amin'ny faritra avaratra ny famokarana ny lemongrass miaraka amin'ny ririnina.
Torohevitra mba hambolena lemongrasses ofisialy: ahoana no hampitombo ny lemongrass amin'ny zana-ketsa sy ny voa
Ny Shizandra Shinoa dia zavamaniry tsy fahita firy ho an'ny latabatay, saingy na eo aza, dia mihamitombo hatrany hatrany any amin'ny zaridainanay izany. Ny lemaka amoron-drano dia tena mahafinaritra, satria mitombo ny endriky ny liana, izay mety amin'ny fambolena any amin'ny firenena, eny an-tokontany. Ny lemam-bazaha sinoa dia zavamaniry ilaina ho an'ny olombelona, ​​satria ahitana karazana asidra malemy sy asidra, siramamy, citrine, sterole ary carotenoids; Ny voankazo voajanahary amin'ny voankazo mainty sinoa, izay misy ny solika iankinan'ny aina, noho izany famolavolana ity zavamaniry ity dia fomba tsara tsy vitan'ny manamboatra ny tranokalanao, fa koa mba hanatsarana ny fahasalamanao.
Copyright 2019 \_ Tantsaha anaty aterneto \_ Fiaramanidina Shine